Naphezu kweqiniso lokuthi ngokusho izibalo abesifazane wezwe kakhulu kunamadoda, abameleli abaningi wobulili namandla uhlangabezana nobunzima lapho ukubanjwa bajwayelane amantombazane futhi abazi ukuthi baziphathe kahle nabo. Ikakhulukazi ezindabeni ezihambelana e ngayo isikhathi sethu, lapho izintokazi e ukubazi nge Madoda, okokuqala unaka yabo ukubukeka, ukukhalipha nokuphana. Madoda, azi kahle kamhlophe ukuthi yini, cishe ubheka ngokwabo esibukweni bese ngiyabona ukuthi ukubukeka yaso ikude isithenjwa, kanye namandla ezezimali (ukuhaha zemvelo noma) akazange avumele ukuba ophanayo. Luhlala luwuhlamvu lunye ithemba - ebuchosheni ukuthi guys ayaqala ukuba ucabange indlela athandwe abesifazane amahle kakhulu njengoba alithandeki ababukeka hhayi kahle imali eningi. Lokho kungenxa yokuthi enjalo yokuphila ngicasukile namantombazane bafana bazalwe okubizwa ngokuthi Ukuthathwa Girls "Dima". Sinenkosi omunye umgomo - ukuyenga abaningi wobulili bubuhle, imali echithwa ngamunye wabo ubuncane isikhathi kanye nemali. Kahle kahle, impahla izindleko akufanele nhlobo. Ngakho-ke, indoda izintokazi imfundamakhwela 'ukuya trainings ahlukahlukene ku pickups futhi "uvolo" amasayithi evumelanisiwe ukuthola ulwazi olufunayo.
Empeleni, sithathe umculi - kuba i okungavikelekile umuntu kudingeka bagomela ngokwaso ngezithukuthuku abesifazane. Abesifazane ngaphezulu wakwazi ukubeka embhedeni, isikhathi esingaphansi nemali esetshenziselwe ke, yinhle kakhulu futhi kuyo 'uyisisulu' yakhe, ngiqiniseka nakakhulu enomuzwa wokuthi ikhaya-esekhulile umakhonya. Ngokuvamile futhi kwenzeka ukuthi guy is ngakho some like 'ukuzijabulisa', ukuthi zothando amantombazane ngaye kuba into lifana mdlalo.
Nokho, thatha umculi - akusiwona i nomuntu ongenazimiso ngubani "bambelela" amantombazane nje ngenxa emehlweni abo bheka inhlobo-alpha besilisa njalo. Kwenzeka ukuze umfana njenganoma iyiphi intombazane ethile, kodwa akazi indlela ke, ngoba uyesaba of inyumbazane. Ngakho ufuna ithuba abe ngaphezulu beqiniseka ngokwabo, ezivivinya ngandlela-thile ukuqonda Psychology abesifazane, Ukuze siqonde ukuthi yini futhi angenza hhayi sicela yakhe ethandekayo. Yena ufuna izindlela eziphumelelayo ngokuqinisekile sidonse amehlo intombazane isithakazelo sakhe. Kodwa, ngeshwa, ezifana a pick up artist - kuba kunalokho okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho. Empeleni, "ukususwa" mithetho ukuze uthole bonke abesifazane ifinyeleleke ngokomzimba.
Amasu for iveni, kunezindlela eziningi, futhi ingatholakala kalula nakuyi-Internet. Ngenhlanhla, amantombazane bazi ngakho, futhi, hhayi ngaphandle kwenzalo ukufunda ngalokho amadoda alungele ukuya obubodwa ongenakulibaleka nabo. Yiqiniso, zikhona nezinye izimo lapho abanye lady okhalazayo ku izinkundla ukuthi pikaper "zisakaze ', futhi manje yena akazi ukuthi yini okufanele uyenze. Izindaba ezinjalo baphokophelele abesifazane kuphela ukuya amasayithi iveni ukuba bewuhlomele iyiphi amaziyo ezikhululekile.
Yini benze "abaqashi"? kungazelelwe zingena mgwaqo kuze kuqala got intombazane enhle futhi ngokoqobo ukubamangaza wakhe abanye umbuzo engavamile noma ukuncoma. Uma "Isifanekiso igebe" yaphumelela ke sizoqhubeka okwengeziwe, ekufezeni ukwethembela okuphelele futhi womusa zabangenacala isakhamuzi lutho. Futhi indlela engcono kakhulu uzivikele "ngumkhuba yemvelo" ezifana pikaper - do "igebe iphethini" yena. Lokho sika kungani amantombazane bese ufaka "ikamu lesitha" ukuze ufunde mayelana yabo esikhohlisayo izinhlelo futhi kuvimbele engase engadingeki ukwazana.
Indlela ukukhetha ikhondomu
Yekuchumana sendlela ukusebenzisa Warcraft 2 ku-Windows 7
Isitshalo se-sement-sand. Ukwakhiwa nokulungiselela
Indlela yokwenza Tuning "amageja '?
Kanjani yesimanje ekhishini Interiors